Maminitsi makumi matatu Ekunyengeterera Kwekuda Uye Nyasha | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Maminitsi makumi matatu Eminamato Yekunakirwa Uye Nyasha
Mapisarema 5:12 Nekuti imi, Jehovha, mucharumbidza vakarurama; muchamukomberedza nenyasha sokunge nenhovo.
Wese mwana waMwari akagadzwa kuti afambe munzvimbo dze nyasha uye nyasha. Zuva retsitsi riri nani kupfuura makore zana ebasa. Kana munhu achitanga kuwana kufarirwa uye inyasha, izvo zvinorwirwa nevamwe, iwe unotanga kuvanakidzwa vasina kunetseka. Nhasi tichave tichiita minamato yenzvimbo dzekuitirwa nyasha nenyasha. Ino munamato maponi achakuvhurira iwe kune imwe nzvimbo nyowani nyowani yezvisimba zvemashura nenyasha. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yemanamato nhasi, haungashaiwi nyasha nenyasha munharaunda dzese dzehupenyu hwako, uchaona ruoko rune simba rwaMwari rwunoratidzwa mune zvese zvikamu zvehupenyu hwako muzita raJesu.
Chii Chinodiwa uye Nyasha?
Favor ndipo apo Mwari vanowedzera flavour pabasa rako. Favor ndipo kana Mwari achinge akuitira iwe izvo izvo vamwe vari kunetsekana kuti zviitike ivo pachavo. Nyasha zvinoreva kusava nebasa, zvinoreva kufarirwa, Mwari vachikupa zvinhu zvausina kukodzera, Mwari vakuropafadze nenzira dzausingafungire. Isu tinoshumira Mwari wevasina kufarirwa, Mwari anotikomborera zvisina hunhu. Mwari haaropafadze vana vake nekuti ivo vakakwana, anotikomborera nekuti isu tiri vana vake, avo vanotenda kwaari neMwanakomana wake Jesu Kristu. Munamato uyu unoratidzira tsitsi uye nenyasha zvinokuisa iwe munzvimbo iyoyo yekufarirwa muzita raJesu.
Ndingaite Sei Kufadza uye Nyasha?
Pane nzira mbiri dzaunogona kufarira kudiwa uye nenyasha, zviri ngekuzvarwa patsva neminamato. Kuzvarwa kutsva kana ruponeso rinokuisa kunzvimbo yenzvimbo dzisina kukodzera uye dzisina kufarirwa. Zuva rawakapa moyo wako kuna Jesu, kubva pazuva iro rawakava mubatsiri weWamwari usingaverengeki, Iwe wakave mwana waMwari, mwana wetsitsi, kurwisa kwako kese kunopera kana iko kufarirwa kwaMwari kunouya muhupenyu hwako. Chipiri unokwanisa kunamatira nzira yako kupinda munzvimbo dzenyasha. Vakristu vazhinji vachiri kunetsekana muhupenyu kunyangwe hazvo vari vana vaMwari. Izvi imhaka yekuti dhiabhori achiri kupokana neruponeso rwako uye tsitsi. Satan anoziva kuti iwe wakaropafadzwa, asi iye acharamba achikuramba, ndosaka uchimuramba naye kutenda neminamato. Iwe unofanirwa kutaura kufarirwa kwako paatari yeminamato. Nguva dzese dzaunonamatira kuti unzwirwe tsitsi nenyasha, unenge uchiyeuchidza Mwari nezveshoko Rake uye nekuita kuti dhiabhori azive kuti unoziva kodzero dzako kubva muzvinyorwa. Nhasi zvaunopinda munamato idzi dzenyasha nenyasha, haumbofi wakashaiwa nyasha nenyasha muhupenyu hwako muzita raJesu.
1. Ndinogashira kunaka kwaIshe, munyika yevapenyu, muzita raJesu.
2. Zvese zvakaitwa pandiri kuparadza mufaro wangu gore rino, ngazviparadzwe, muzita raJesu.
3.Oho Ishe, saAbrahama sezvaakawana tsitsi kubva kwauri, ndinogashirirawo nyasha Dzako kuti ndikwanise kukunda, muzita raJesu.
4.Ishe Jesu, ndiitirwe zvakanaka gore rino, muzita raJesu.
5. Hazvina basa, kuti ndakafanirwa nazvo here kana kuti kwete, ndinogashira tsitsi dzisina mhaka kubva kuna She, muzita raJesu.
6. Chero ropafadzo Mwari yaakandichengetera gore rino haingandipfuure, muzita raJesu.
7. Kuropafadza kwangu hakuzoendeswa kumuvakidzani wangu, muzita raJesu.
8. Baba ishe, nyadzisai mese, simba, izvo zviri kuba kuba chirongwa chenyu chehupenyu hwangu, muzita raJesu.
9. Nhanho imwe neimwe yandinotora gore rino inotungamira mukubudirira kukuru, muzita raJesu.
10. Ini ndichakunda nemunhu uye naMwari, muzita raJesu
19. Kunyadziswa mune zvemari hakuzombofi kwakaenderera mberi kuri Mugove wangu, muzita raJesu.
21. Ah Ishe! Rega ndiwane nyasha pameso pako kuti undipe zvese zvandinokumbira zve (taura chikumbiro chako) muzita raJesu.
22. Oh ishe, nditenderei kugamuchira nyasha chero pandinenge ndiri muzita raJesu.
23. O Ishe, ratidzai saMwari une nyasha mune angu mamiriro muzita raJesu.
24. Ndinoreurura nhasi kuti mudzikunuri wangu anorarama uye uchaita kuti Nyasha dzake dziite kuti ndimire pasi rino mukubwinya muzita raJesu.
25. Mwari wenyasha! Ndiratidze tsitsi nhasi uye ngoni dzako dzindibvute kune vanotsvaga kufa kwangu muzita raJesu.
26. Tenzi ngavabvise miromo inobata kumeso yakandikomberedza kuti varege kuparadza hupenyu hwangu muzita raJesu.
27.Oh Ishe! Shandisa zvese zvakandikomberedza kuitira mukana wangu muzita raJesu
28. Ah Ishe! Ini ndinotsvaga chiso chako semwana anotsvaga kumeso kwevabereki. Honzesa tsitsi nenyasha dzako kuti dzigeze mandiri muzita raJesu.
29. Ah Ishe, ndinodana kwamuri mumatambudziko angu nhasi. Ndinzwei, mundinzwire tsitsi nenyasha muzita raJesu.
30. Ishe, regai mufaro utevere minamato yangu zvinoenderana nekunaka kwako muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato makumi matatu emaropafadzo emimba
inotevera3 Mazuva Ekutsanya Uye Minyengetero Yekununurwa Kwemhuri
Faustina Boateng Chikumi 27, 2020 Panguva ya12: 24 pm
AMEN Amen n Amen ndatenda Jesu nekuda kwemunamato wakapindurwa, Mwari vakuropafadzei kwazvo zvisina muyero.
Munamato weKuchengetedzwa kwaMwari muna 2021